Fa nahoana tokoa moa no tsy afaka hiezaka hampitovy ireo tananantsika amin’ireo tanan-dehibe any ivelany ny filoha Rajoelina ? Miami, Parisy sy ny hafa koa no ataony filamatra ho tratrarina ao anatin’ny taona vitsivitsy…Manao tifi-danitra ve ? Izany anefa no tokony ho atao raha te hanatratra ny tampon’ny tendrombohitra. Fanaon’ny avo fikendry rehetra ny toa izany.
Olona zatra ny miatrika ny avo sy mafy ity kandidà volom-boasary mahatalanjona loatra ity. Hita soritra izany ho an’izay maharaka ny tantaram-piainany. Tsy vao herotrerony moa ve izy dia efa nahatsangana orinasa sahady, dia ny Injet, ny Domapub ary ny Viva tele sy radio izany ? Tsy vao 33 taona moa izy no lany ben’ny tananan’Antananarivo renivohitr’i Gasikara ny 13 novembra 2007, izany hoe nandritra ny fitondrana Ravalomanana ?
Tsy mora ny nandresy ny antoko TIM izay tao anatin’ny tanjany tokoa tamin’izany fotoana izany, nefa dia lany soa aman-tsara tamin’ny salan’isa 63,32% izy. Taona 2008, natombony ka vitany soa aman-tsara ny fananganana indray ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo, izy may tamin’ny rotaka tamin’ny mey 1972, izany hoe 2 taona talohan’ny nahaterahany, asa izay tsy natombok’ireo ben’ny tanàna maro talohany akory, nandritra ny 36 taona saingy tontosany soa aman-tsara.
Lalovana fotsiny ny nandavoany ny fitondrana jadon-dRavalomanana izay lasa nomen’ny rehetra lamosina, hatramy mpanao politika ka hatramin’ny mpitandro ny filaminana rehetra izay nijery fotsiny, hany ka hany herin’ity filoha naloan’ny vahoaka ity vaky nilefa tany ivelany ny andron’ny 17 marsa 2009. Vao aingana ihany koa ny fotoam-pitondran’i Andry Rajoelina ny fanjakana tetezamita farany teo izay naharitra fotoam-pitondrana filohan’ny repoblika iray mihintsy, ka aleo lalovana vetivety fotsiny ihany.
Na dia tsy tafaverina aza ireo mpamatsy vola nandao ny fanjakana malagasy tamin’ny fotoam-pitondran’ny filoha teo aloha Ravalomanana, ka nataon’ito farany ny fomba rehetra nanafoanana ny AGOA, dia tsy nisy ny hetsi-bahoaka goavana nentina nandavoana ny fitondrana tetezamita. Izany dia na efa navela niketrika isan’andro tao amin’ny fefin’ny Magro tao Behoririka ka tsy norarana mihintsy aza ny mpomba ilay filoha nametra-pialana avy eo nitsoaka nakany Afrika Atsimo io.
Voaloha ara-dalàna ny karaman’ny mpiasam-panjakana sady nisondrotra 10% isan-taona, ary fotodrafitr’asa maro no vita, toy ny seham-pilanonana goavana Coliseum, ny hopitaly manara-penitra isaky ny tanan-dehibe maromaro, ny trano fonenan’ny mpianatry ny anjerimanontolo, ny trano mora, ny lapan’ny tanàna sy bazaribe any Toamasina, sy ny maro hafa.
Izany lehilahy izany no mampanantena zava-dehibe maro ankehitriny, fa indrindra mba hitondra ny Malagasy amin’izay eo amin’ny sehatry ny fandrosoana tena izy. Azo antoka fa hanao izay fara-takatry ny ainy sy ny sainy izy amin’izany. Inoana fa hisy ny vokatra mafonja sady mahate hidera ho vitan’ity filoha tanora sy mavitrika ary mazoto ity. Noporofoiny tamin’ny fotoana lasa ny fomba fiasany manara-penitra sy hafainganam-pandehany toy ny lamasinina TGV. Ary mihoatra lavitra noho izany no hataony rehefa hany lany soa aman-tsara ho filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara vaovao ny filoha Andry Rajoelina, manomboka ny taona 2019 ho avy io.